Kudengenyeka kwenyika kunoparadza Puerto Rico, kunoparadza kukwezva kukuru kwevashanyi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Kudengenyeka kwenyika kunoparadza Puerto Rico, kunoparadza kukwezva kukuru kwevashanyi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • nhau • Puerto Rico Kuputsa Nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kudengenyeka kwenyika kwakasimba kwakaparadza Pota Riko, nedzimba dzakapunzika, mota dzakapunzika uye migwagwa yakafukidzwa nematombo nemarara - sezviri pachena mhedzisiro yedhaka.
Vazhinji vagari vepachitsuwa vakasara vasina simba mumashure mekudengenyeka kwe5.8-ukuru.
Hapana tsunami yambiro yakaburitswa uye hapana vakaurayiwa vakataurwa.
Kudengenyeka kwanhasi kunonzi kwaive kumwe kukuru kwazvo kusvika nhasi kurova nharaunda yeUS.
Sekureva kwemumwe mugari wemuno, uku kwaive kumwe kwekudengenyeka kwakasimba kusvika parinhasi kubva zvakatanga kudengenyeka muna Zvita 28.
Dunhu rekumaodzanyemba kwePuerto Rico rakatambura netambo dzekudengenyeka kudiki, kubva pakakura kubva pa4.7 kusvika ku5.1, kubvira mukupera kwaZvita.
Kukwezva kwevashanyi kwakakurumbira - dombo redombo, rinozivikanwa sePunta Ventana, rapunzika mushure mekudengenyeka kwenyika kwakazunza chitsuwa ichi. Punta Ventana dombo kuumbwa, iri pamhenderekedzo yekumaodzanyemba kwePuerto Rico, yaizivikanwa kwazvo nevashanyi vePuerto Rico.
Meya weGuayanilla, Nelson Torres Yordán, akasimbisa kuti Punta Ventana, iyo yaive "imwe yenzvimbo huru dzekushanya kuGuayanilla" yaive matongo.
Puerto Rico ichiri kupora kubva Hurricane Maria, dutu reChikamu 5 rakaparadza zvikamu zveCaribbean munaGunyana 2017. Dutu racho rinofungidzirwa kuti rakauraya vanhu 2,975 uye rakakonzera $ 100 bhiriyoni mukukuvara.